I-Raw Testosterone Enanthate abavelisi bePowder kunye nabaThengisi-abaMveliso
I-Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7)
I-testosterone enanthate ihlelwa njenge-AAS kuba yinto yesibini yokwenziwa kwe testosterone kunye ne-testosterone pro-drug, oku kuthetha ukuba ivuselela umzimba ukuba ivelise i-testosterone yodwa. Xa kuthethwa oko, kunemiphumo enamandla kunye ne-androgenic kunye neempembelelo ze-anabolic kuphela.
I-Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) ividiyo
I-Raw Testosterone Inanthate powder (315-37-7) Inkcazo
I-Raw Testosterone Enanthate powder, ethengiswa phantsi kwegama lohlobo lwe-Delatestryl phakathi kwabanye, i-androgen kunye ne-anabolic steroid (AAS) imyeza esetyenziswa kakhulu kunyango lwe-testosterone ephantsi kwamadoda, kwaye iphinde ilibazele ukutshatyalaliswa kwamakhwenkwe kumakhwenkwe, kunye nomhlaza wesifuba kubafazi . Ikwasetyenziswa kwakhona kwi-hormone yokwelapha amadoda angama-transgender. Inikwe ijokelelo kwisisipha ngokuqhelekileyo kanye emva kweeveki ezimbini ukuya kwezine.
Ukongeza kwindlela yokusetyenziswa kwonyango, i-Testosterone Enanthate powder isetyenziselwa ukuphucula umzimba kunye nokusebenza. Isilwanyana yinto elawulwayo kumazwe amaninzi kwaye ngoko-ke ukusetyenziswa kwezonyango ngokungekho gwenxa.
I-Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw Testosterone Enanthate powder
Igama leKhemikhali Testosterone heptanoate; Testosterone enantate; I-hepelateli yeSettosterone; Androtardyl
uhlobo Numama Delatestryl
Iqela leziyobisi androgen kunye ne-anabolic steroid, Androgen ester
Inani leCAS 315-37-7
InChI isitshixo I-VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
I molecular Fi-ormula C21H28O3
I molecular WSibhozo 400.59
IMasaisotopic Mass 400.298 g / mol
Ukuxuba Point 34-39 ℃
I-Biological Half-Life Ukugqitywa kwesigamu-ubomi (i-Intramuscular) i-4-5 imihla
Sukufaneleka I-Insoluble emanzini
Sisibetho Tukushisa 2-8 ℃
isicelo Androgen. ukwakha umzimba
Yintoni i-Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7)?
I-Testosterone enanthate powder iyinhlobo yesilwanyana se-androgen, kwaye yinto yokwenziwa komculo we testosterone kunye ne testosterone enantate .Ifestosterone enanthate powder eyaziwa ngokuba yi-testosterone heptanoate, anabolic kunye ne-androgenic steroid (AAS) isilwanyana esetyenziselwa ukuphatha amanqanaba aphantsi e-testosterone. Iziyobisi zenziwe ngamanyango, kanti i-androgenic ibhekisela ekuphuculeni iimpawu zesini zesini.
Ipropystone ye-Testosterone enanthate powder (315-37-7) isebenza njani
I-testosterone enanthate powder yi-andro genic kunye ne-anabolic steroid esetyenziselwa unyango lwamazinga aphantsi e-testosterone. Oko kuthetha ukuba inokusetyenziswa kokubili ukwakha izihlunu kunye nokwandisa impawu zesini zesini. Yenza oku ngokufaka indawo yeTesttosterone enokuthi iphantsi komzimba.
Namhlanje amaninzi omzimba abasebenzisa i-Testosterone enanthate powder ekukhawulezeni ukuphucula, ukutshisa amafutha kunye nokwakhiwa kwezihlunu. Yintoni eyenza ithandwayo yindlela ephumelelayo ngayo abo bayisebenzisayo bayithatha ngokwayo okanye bayifake kwi-stteroing yabo.
I-Raw Testosterone Inanthate powder (315-37-7) Isisombululo
I-testosterone enanthate iyimfucuza ecacileyo okanye ephuzi ebonakalayo kwi-5-milliliter (mL). Injected ngeentramuscularly ukuya emathangeni nganye ukuya kwiiveki ezine. Ukuze ugweme amazinga e-hormone eguqukayo (kunye neempembelelo ezinxulumene nomoya), ama-dosage aphantsi atyathwa ngokufutshane ngexesha elifutshane.
Iyeza elisebenzayo, elimiselwe kwioli yesesame, linokuphumla kwexesha eliphakathi kweeveki ezimbini ukuya kwiiveki ezintathu. Umyinge ungadlulela ngabanye kodwa ngokuqhelekileyo ukhankanywe ngolu hlobo lulandelayo:
I-hypogonadism yamadoda: 50 kwi-400 milligrams (mg) nganye kwiiveki ezimbini ukuya kwezine
Ukulahlwa komntwana wesilisa: 5 ukuya kwi-200 mg nganye kwiiveki ezimbini ukuya kwezine kwiinyanga ezine ukuya ezintandathu
Umdlavuza webele we-Metastatic: 200 kwi-400 mg nganye kwiiveki ezimbini ukuya kwezine
I-Transgender unyango lwe-hormone: 50 ukuya kwi-200 mg ngeveki okanye kwi-100 kwi-200 mg nganye iveki ezimbini
I-Raw Testosterone Enanthate powder (315-37-7) Sebenzisa
Imiphumo ye-testosterone enanthate powder ifana neyo ye-testosterone acetate, equka ukukhuthaza ukuveliswa kwamalungu esini zesini kunye neziganeko zesini zesini kunye nokuchasa isrogen. I-testosterone enanthate powder nayo ineprotheyini ehambelana nemiphumo, evumela ukuba incede ukukhula kwemisipha kunye nokufumana ubunzima. I-testosterone enanthate powder ingavimbela i-pituitary gland iphinde ikhuthaze i-hormone ye-sex hormone, ngaloo ndlela iyancipha i-testosterone engapheliyo efihliwe yiiseli ze-Leydig, ezifezekisa injongo yokuvimba u-spermatogenesis.
I-testosterone enanthate powder ingasetyenziselwa njengelinye ixesha elide lokulawula izidakamizwa. Kusetyenziswa okliniki ukuphatha unyango lwe-hypogonadism kunye ne-gonadal insufficiency, i-sex organ organgenesis, ukungabikho komntwana, ubuhenwa, kunye ne-cryptorchidism. Ingasetyenziselwa ukuphatha i-female uterine functional bleeding, i-menopausal syndrome, umdlavuza webele kunye nomhlaza wesibeletho. Iyakwazi ukuphatha i-cirrhosis, i-aplastic anemia, i-osteoporosis kunye nezinye izifo ezixhamlayo.
Thenga i-Testosterone Enanthate powder esuka eBuasas.com
Uluhlu olukhulu kunabo bonke phakathi kovavanyo lweNzululwazi kunye noVavanyo
I-Testosterone: Ulwahlulo-Ukungabi naso-Ukwahlula, okwenziwa nguEberhard Njeschlag, uHermann M. Behre, iphepha 417, 533-560
I-Williams Bookbook ye-Endocrinology E-Book, uShlomo Melmed, uKenneth S. Polonsky, uP. Reed Larsen, uHenry M. Kronenberg, Page 759-780
Anabolic-Androgenic Steroids, ehleliwe nguCharles D. Kochakian, iphepha 46-60
I-Raw Testosterone Propionate powder (57-85-2)
I-Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6)